Edit Chii chinokonzeresa neUS dollar exchange ichikwira ra
Chii chinokonzeresa kukwira kwemadhora ekuUS kune vanotengesera kunze muchina wekuChina?
Kukwira kwedhora reUS inhau dzakanaka here kana kuti nhau dzakaipa kune vedu vagadziri vemichina inoputika uye vanotengesa kunze?
Chivabvu 11 yakagadzirwa muChina Morning Post Chitatu, Kubvumbi 11 yekarenda yemwedzi
Nguva chaiyo yekuchinja "BOC mutengo wekutenga wekunze": 1 US dhora = 6.7216 RMB / / 1 euro = 7.0747 RMB
Idzi inhau dzakanaka here kana dzakaipa kune edu epfuti blasting machine vagadziri?
Shanduko yemutengo wemari yekunze yeUS ine chekuita nei pakutengesa kunze uye kunze kwemuchina unoputika?
Hongu, kukanganisa kwekukwira kwemadhora ekuAmerica emari yekunze pahupfumi hweChina kune zvese zvakanakira nezvayakaipira, asi kazhinji kutaura, ine zvakawanda zvakaipira pane zvakanakira.
Chekutanga, hazvina kunaka kune kutengeserana kwekunze kweChina Kuvandudza kutengeserana kwekunze uye kuwedzera kutengesa kunze kwenyika ndicho chinhu chikuru United States iri kuisa dzvinyiriro pakutenda kweRMB nechikonzero chekuti United States ine kushomeka kukuru kwekutengeserana neChina.
Tinogona kuziva kubva muruzivo rwezvehupfumi kuti kana mari yemuno ichikoshesa, mari dzedzimwe nyika dzichadzikira, ndiko kuti, pamabasa ekutengeserana kunze kwenyika, nyika inotenga kunze kwenyika inofanira kupa imwe mari yemukati mukutsinhana kwezvinhu zvakafanana, saka iyo inotengeswa kunze kwenyika. nyika inogona kuchinjanisa zvinhu kune dzimwe nyika, izvo zvinokuvadza kutengesa kwayo kunze.
Kusiyana neizvi, kana mari yemunharaunda yakaderera, mari yedzimwe nyika ichakoshesa, kureva kuti, mari yakawanda yemunharaunda inodiwa kuunza zvinhu zvakafanana, izvo zvinokuvadza kutengesa kune dzimwe nyika.
Sei dhora rekuAmerica richikwira kudenga panguva ino?Tichinyatsofungisisa pamusoro pepfungwa yekutenda kweUS dollar, isu tiri kuwedzera kuziva kuti "Eurodollar" misika ndiyo kiyi yedambudziko.
Kukoshesa kwakasimba kwedhora rekuAmerica hazvirevi kuti dhora rekuAmerica rakasimba.Zvakasiyana, zvinoratidza kusadzikama kwakanyanya kwepasi rose US dollar circulation system!
Maonero ari pamusoro anotsanangurwa nemudzidzisi wangu.Semutengesi akajairwa kunze kwenyika wepfuti inoputika muchina, manzwiro akanyanya kunzwisisika munguva pfupi iri kutevera kudzikiswa kwemaodha ekutenga kunze kwenyika;Uye kukwira kwemutengo kwevatengesi vepamusoro.
Rubber Belt Shot Blasting Machine, Hook Polisher Abrator, Kaviri Hook Abrator, Kuburikidza neFeed Shot Blasting Machine, abrator, Rubber Belt Type Shot Blasting Machine, Zvese Zvigadzirwa